Gumiin Naannoo Hararii Murtii Boordii Filannoo Morme
Ebla 13, 2021
Faayilii - Magaala Dirree Dawaa
Dhalattoonni Hararii kanneen naannoo sanaa ala jiran filannoo irratti akka hirmaatan kan mootummaan badhaadhinaa naannoo Hararii gaaffii dhiyeesse boordiin filannoo akka hin simanne murtii dabarse gumiin Hararii beeksisee jira.
Kana dura filannoo biyyoolessaa geggeessaman shan keessatti naannoo filannoo addaa kan Jagol irratti hirmaataa kan turan hawaasi Hararii kanneen Dirree Dhawaa keessaas murtiin sun sirrii miti jedhan. Boordiin filannoo garuu murtii sana heera irratti hundaa’een murteesse jedhee jira.
Afaan yaa’iin gumii biyyoolessaa Hararii obbo Muheddiin Ahimed ibsa gaazixeessotaaf kennaniin boordiin filannoo hawaasi dhalattoota Hararii kanneen naannoo Harariif sagalee kennan wiirtuu filannoo addaa fi waraqaa filannoo qopheessuu dhiisuuf murteessuun murtee seera cabse jedhan.
Naannolee filannoo Hararii keessa kanneen jiran barcuma 36 kkeessaa 14 filuu fi filatamuuf dhalattoonni Hararii qofti akka irratti hirmaatan heerri eeyamu kan jiru ta’us, ittiin ka’umsi murtii sanaas mootummaa ce’umsaan kan murtaa’e ta’uu obbo Muheddiin Ahimed ibsaniiru. Kunis hawaasichi sab xiqqaalee ta’uuf dhalattoonni isaa hedduun naannoo sanaa ala jiraachuu isaanii tilmaama keessa galchuu dhaan jedhan.
haa ta’u malee akka heera mootummaa Itiyoopiyaatti caasaa mootummaa naannoo tokkoo keessa kanneen jidra miseensonni mana maree, filatamuu kan qaban jiraattota naannoo sagalee kennan qofaa dhaan jechuu dhaan boordiin filannoo beeksisee, seerri murtii kana jijjiirsisuu danda’u heera biyyaa irratti hin argine jechuun ibsa baaseen baaksiseera jechuun Addis Chekol gabaaseera.